I-China eyenziwe ngokwezifiso Ilogo Ephrintiwe Isitolo esidayisa yonke impahla Amakhadibhodi Esipho Esenziwe Ngomkhiqizi Nomhlinzeki | I-Huaguang
Amabhokisi wesipho esenziwe ngokwezifiso e-logo eyenziwe ngokwezifiso ene-Ribbon
Ibhokisi Lesipho Lephepha
Usayizi: 18 * 16 * 13cm
Ukuphrinta, kuyinhlobonhlobo yemikhiqizo ephrintiwe, cishe egcwele izingubo zabantu, ukudla, izindlu, ukuhamba emkhakheni, futhi impilo yabantu isondele kakhulu. Yini isilinganiso seqoqo lezingxenye ezibukhoma? Akugcini nje ngokubona ukuthi umbala wokuphrinta uyahambisana yini nezidingo, kepha futhi nokubona ukuthi ngabe leliqoqo likayinki obukhoma lizinzile yini. Namuhla, Ngokususelwa kuleli bhokisi lesipho, ngithanda ukwabelana nawe ngezinto eziningana ezinomthelela ekuzinzeni kombala weyinki:
Umphumela obonakalayo wombala weyinki ungenye yezinto ezibalulekile ukukala ikhwalithi yento ephrintiwe. Umbala weyinki ofanayo, umbala onembile futhi ogqamile nombala ongaguquguquki yizidingo eziyisisekelo zekhwalithi yento ephrintiwe. Ukuqondwa okulungile kwekhwalithi yokuphrinta kombala wenki kubaluleke kakhulu ekulawuleni okunembile kombala wenki wokuphrinta nokwenza ngcono ikhwalithi yokuphrinta yemikhiqizo yokuphrinta umbala.
Ukugcina izinga lokushisa nomswakama njalo kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuzinza koyinki. Ukuphrinta ehlobo, ngenxa yezinga lokushisa elisezingeni eliphakeme kuphezulu, ngakho-ke uyinki yokudlulisa i-roller kalula, futhi ngokwanda kwesikhathi sokuphrinta, ukuphrinta inki ukwenziwa ngcono, ngaphansi kwesimo sobuningi obufanayo, ikhwalithi yokuphrinta uyinki uzojula, ngakho-ke inqubo yokuphrinta ukuthola isignali yobuningi, okuqhathaniswa kaningi nesampula esayiniwe, uma kunesidingo kungancishiswa kahle inani likayinki, ukuphrinta nokusayina umbala wesampula.
Ebusika, njengoba izinga lokushisa elizungezile lilonke liphansi, izinga lokushisa lazo zonke izingxenye zomshini liphansi lapho umshini uqalwa ekuseni. Ama-opharetha wokuphrinta kumele enze la maphuzu amabili alandelayo ngaphambi kokuqala ukuphrinta.
Okokuqala, ngcono izinga lokushisa kanye nomswakama we-workshop ukuze ufinyelele ezingeni (izinga lokushisa lingu-20 ~ 24 ℃, umswakama ungama-60% ~ 70%).
Okwesibili, faka inki yokushisa noma engeza izithasiselo noma uyinki kukayinki, ukukhulisa ukuhamba kukayinki, bese uqalisa.
Ngenhloso yokuvikelwa kwemvelo, leli bhokisi lesipho ligcina umbala wezinto zokusetshenziswa, ngakho-ke izinga lokushisa linomthelela omncane noma omncane kulo.
Ukuhlungwa kwesisombululo somthombo
Kulezi zinsuku amaphrinta amaningi amukelwa uhlelo lwenguqulo yemfundo ezenzakalelayo, kepha ngohlobo olwengeza ngesandla ukuhlobisa umshini oketshezi iphrinta idinga ukusebenza kwabasebenzi ukuthunyelwa kwenguqulo enhle yemfundo ngaphambi kokuqalisa, lokhu kungenxa yokuthi inqubo yokuphrinta ukufaka amanzi notshwala nethangi lamanzi enkabeni emathafeni uhlobo oluthile lwemfundo luketshezi ekushiseni nasekugxileni kwakwehlukile, kulula ukudala ukuphrinta ngokungcolile, kepha uma ufuna ukususa isidingo esingcolile esintantayo sokwandisa inani lamanzi, amanzi ayinki azokwanda futhi abe lula.
Ngaphezu kwalokho, ukugxila kwesixazululo somthombo kufanele kuhlangabezane nezidingo zokuphrinta, ezingalinganiswa ngephepha lokuhlola le-pH noma imitha lokuhlushwa. Uma ukugxila kukhulu kakhulu, khona-ke uyinki kunoma ikuphi futhi akuhlangabezani nezidingo, futhi uyinki uzokhishwa ngokushesha; Futhi uma ukuhlushwa kuncane kakhulu, inani lamanzi elingezwe ezingxenyeni ezinkulu ezintantayo ezingcolile lizosuswa, futhi uma ukusheshisa kokuphrinta, ezintantayo ezingcolile kuzovela kalula endaweni yomlomo, ukwanda koyinki wamanzi kuzoba okungajulile, ukwakha umjikelezo ononya, okwenza ukuzinza kombala weyinki kungalawulwa.
Lawula inani likayinki
Ukuqagela ngaphambi kokuphrinta kubaluleke kakhulu. Ngemuva kokulungiswa kombala wenkini, isampula ejwayelekile yokuphrinta, eyaziwa nangokuthi isampula yesiginesha, kufanele iphrintwe kuqala, bese ilenga etafuleni lesampula.
Lokhu kudinga ukuthi senze izinto ezimbili ezilandelayo ngaphambi kokuphrinta:
Okokuqala, ngaphambi kukayinki ukunciphisa inani lamanzi, ngoba ukumiswa kwesakhiwo okuhlukile kwehlukile, isidingo samanzi sizohluka.
Okwesibili, ukuminyana kwensimu yebha yesiginali kufanele kube ngaphakathi kwebanga elijwayelekile (lokuphrinta ngemibala emine, i-Y ingu-0.85 ~ 1.10, M ingu-1.25 ~ 1.50, C ingu-1.30 ~ 1.55, K ingu-1.40 ~ 1.70).
Isizathu sokuqinisekisa amaphuzu amabili angenhla ukuthi uma inani leyinki lengxenye yokugcina ebukhoma likhulu kakhulu, futhi ingxenye ebukhoma yamanje incane kakhulu, futhi amanzi awancishiswa ngaphambi kwesikhathi ngaphambi kokufakwa kukayinki, khona-ke umbala kwesiginesha akuwona neze umbala ojwayelekile weyinki, futhi nakanjani kuzoshintsha ngesikhathi sokuphrinta. Futhi ngakho-ke inani likayinki ekubekweni ngeke lihambe, lizokwakha kancane ku-roll futhi liqiniswe kancane kancane, ku-roller yamanzi ngemuva kokungcola ezintantayo kunzima ukukuqeda, futhi ukuphrinta ngenani elifanayo le-powder spraying kuzoba okunamathelayo. Ama-opharetha ngokujikeleza kwe-inki roller okwenzeka lapho umsindo ka- "yi yi", noma inking roller inking futhi icwebezela bangahlulela lesi simo.
Ngakho-ke ukaputeni wokuphrinta ngaphambi kwesampula yesignali kufanele akhe umkhuba omuhle wokunciphisa amanzi, obonwe kwinqubo yokuqalisa inguqulo yephepha neyinki yomlomo we-diao ukuthayipha, kuze kube yilapho ukwanda kwamanzi kuqeda kancane kancane ukungcola okuntantayo, khona-ke isignali ukuminyana kuvumelana nokujwayelekile, uyinki uhambisana nencazelo yangempela, "ngoyinki omncane ophrintiwe ojwayelekile kanye nobuncane bokuphrinta amanzi" ithiyori, lokhu kubukhoma kuzoba lula kakhulu ukwenza ukuzinza kwe-inki, kulula ukuyilawula.
Ngokufanayo, leli bhokisi lesipho alinakho ukuphrinta, kepha singenza ngezifiso amabhokisi ezipho ahlukahlukene ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izinhlobo ezahlukahlukene zebhokisi nemibala ecebile, ukuphrinta ngokuqinile hlola umbala wenki, kungukukhiqizwa kokugcina kokwaneliseka kwamakhasimende izimo ezidingekayo zebhokisi lesipho.
Leli phuzu lihamba ngokuzinza kukayinki kulo lonke, ngoba kuphela ephepheni le-feida elizinzile ngaphansi kwesisekelo sokuzinza, umbala ungahlala uzinzile. Uma ukulungiswa kokulungiswa nokungafanele, imoto engenalutho nesidina, futhi zombili kungadala inki ayizinzile, futhi kuzomosa iphepha eliningi, uma kwenzeka iphepha elikhulu le-offset elenziwe ngombane (iphepha ngokuvamile lingaphansi kwe-100 g / m2), kulula ukuvela isibhakela esilawulayo nephepha kunokulinda into, kuzodingeka ukuthi icabange ngenye indlela yokwandisa umswakama womoya, obekwe ngaphezulu kokuphakelwa kwephepha le-feida, kuqedwe induku yensimbi ye-electrostatic ukuze kuqedwe ugesi wephepha omile.
Ikhwalithi yezingxenye ezibukhoma iyahlukahluka, futhi iphrinta ingaba nezinki ezintathu noma ngaphezulu zomshini wokuphrinta (izingxenye ezibukhoma ezingadingi kakhulu ngokuvamile ziyinki eshibhile, kuyilapho lezo ezibiza kakhulu zingeniswa). UCaptain ekusebenziseni kwabo izinkomba zikayinki banokuqonda okuningiliziwe nokuqonda.
Njengoyinki owomile ngokushesha kumakhasimende afana nesikhathi sokuphumula noma isikhathi sokuphumula eside, esomile ngokushesha, uyinki wokuphrinta uzothumela ukukhanya futhi, futhi ngenkathi ehlukile, izimo ezihlukile zokushisa, uyinki uzokhombisa i-viscosity ehlukile, ngakho-ke ukaputeni udinga ekusebenzeni okwehlukile kukayinki, i-doping noma i-adjuvant kawoyela owomile, noma ngokulawula izinga lokushisa nomswakama ukulawula i-viscosity ye-inki.
Abakhiqizi abaningi bakhiqiza ama-inki, kepha sithenga kuphela ama-brand brand. Amabhokisi amaningi ezipho asebenzisa umbala we-pantone ekwakhiweni kwawo. Eminye imibala izwela kakhulu futhi izokhiqiza umehluko wombala ngokuya ngezinguquko zemvelo.
Ikhwalithi yephepha ibamba iqhaza elibalulekile ekusimeni kophayini wokuphrinta. Uma uhlangabezana nekhwalithi empofu, kulula ukulahla iphepha, noma ngabe ungalawula kanjani, alikwazi ukugcina ukuzinza kukayinki. Uma kwenzeka iphepha lingenakushintshwa, kungathathwa lezi zinyathelo ezilandelayo.
1) Sula izinhlangothi zephepha ngendwangu emanzi ukuze ususe umphetho woboya bephepha obudalwe ummese wokusika obuthuntu.
2) ukwengeza inani elifanele lezithasiselo kuyinki kuzosuswa, ukuze i-viscosity inciphe, uyinki engubeni yokunamathisela ingubo yokulala kuzoba ngcono.
3) Lapho inani lezingxenye ezibukhoma likhulu, kucatshangelwa ukulandelana kombala okuphikisiwe (ngaphandle kokuthinta umbala wokugcina). Uyinki omncane ubekwa ngaphambili kuthi oyinki omkhulu afakwe eqenjini lemibala engemuva. Ngale ndlela, lapho iqembu lokuqala noma lesibili lephepha liphrintwa ngoyinki omncane futhi sekubekwe isibuko esikhanyayo, isimo sokulahleka kwezinwele ebusweni bephepha sizothuthukiswa kakhulu.
4) Nciphisa ingcindezi yokuphrinta, hlela ngokunengqondo izikhathi zokuhlanza ngengubo, ngemuva kwengubo ngayinye yokuhlanza, faka iphepha eliningi (alikho uhlangothi lokuphrinta olubheke phezulu) lokuphrinta kwesilingo, okuzodlala indima yokuphrinta kwinqubo yokuphrinta elandelayo yenki elula, ngakho-ke ukuthi izinga lokulahlwa liyancipha.
Ngokufanayo, ibhodi lephepha nephepha lokwakhiwa elisetshenziswe kuleli bhokisi lesipho lithengwa ngumenzi osebenzisane nathi iminyaka eminingi. Izinga lephepha alibonakali ngaphandle, ikakhulukazi ibhodi elimpunga, libukeka lihle ngaphandle, kepha umongo awulutho neze. Ngakho-ke sithenga kuphela izinto zokusetshenziswa kubakhiqizi esibathembayo. Ngemuva kwakho konke, ngokuwohloka kwemvelo, ukuqaphela kwabantu ngokuvikelwa kwemvelo kuya ngokuqina. Amabhokisi ezipho asezingeni elifanele kuphela okufanele athunyelwe kubangani nezihlobo.
Idizayini yombala yangempela.
Gcina umbala wokuqala webhokisi lesipho, ulungele imvelo kakhulu.
Izinto ezingenazo izithiyo.
Akukho ukwahlukanisa ngaphakathi kwebhokisi lesipho, ngakho-ke ungabeka izipho nomaphi lapho uthanda khona.
Langaphambilini Amalebula amabhodlela angenamanzi, amafilimu alula noma ama-matte anama-roll
Olandelayo: Ibhokisi lephepha lokunakekelwa kwesikhumba lifakwa ngebhokisi lohlobo lwencwadi le-PVC
Amabhokisi Okugcina Okuhlobisa
Kabusha Ngesandla Esiqinile amakhadibhodi Paper Rose Imbali Bo ...